Mpihatsaravelatsihy | NewsMada
Samy manao izao ihany kanefa miraradraraka ery ny fiampangana ny sasany ho manao fampielezan-kevitra mialoha ny fotoana. Tsy tahotra tsy henatra fa mamelively mafy ery ny ekipan’ny antoko Hery vaovaon’i Madagasikara miampanga ny hafa. Tsy takona afenina fa miharihary toy ny masoandrobe lohataona ny hetsika etsy sy eroa, fitsidiham-paritany hisehosehoana, hitokanana zava-bita, na fitsidihana fotodrafitrasa eo an-dalam-panamboarana, sns. Indraindray aza, hita foronina fotsiny izao izany ka terena sy hahetsika ny manampahefana any amin’ny isam-paritra any, hamory vahoaka hihaino kabary… Kabary politika, kabary fampielezan-kevitra.
Hita ao anatin’ireny tambajotran-tserasera ireny fa nahavitana rakitsary na ireny antsoina hoe « clip » ireny mihitsy izany. Toy ny dokambarotra alefa amin’ny fahitalavitra. Ilay asa vita, na fitokanana na fanaraha-maso na fitsidihana karazana fotodrafitrasa hisehosehoana anefa, tsy an’iza fa an’ny vahoaka ihany. Volam-bahoaka, na nomen’ny mpamatsy vola vahiny izany na nampindramina. Kanefa, idedadedahana amin’ny hoe « tetikasan’ny filoham-pirenena ».
Izany sy ireny no antsoina mazava hoe «fampielezan-kevitra mialoha ny fotoana». Mahavariana anefa ny fanasoketana sy fanaratsiana tsy misy farany ataon’ireo mpikarama an’adin’ny antoko HVM. Indraindray aza, lasa lavitra mihitsy ka hatramin’ny zaza tsy manan-tsiny no voatonontonona, toy izay nitranga, andro vitsivitsy lasa izay. Maro rahateo ireo naneho hevitra sy nanakiana an’ireny sangy mihoatra ny loha,… loham-boto, ireny.
Izany ny toe-po amam-panahin’ny sasany ankehitriny. Ny sasany izay tsy menatra mitonona ho mahalala an’Andriamanitra sy hoe kristianina. Tsy fantany, na odiany tsy fantatra, anefa fa izany ny atao hoe fihatsarambelatsihy. Sahaza azy ireo tsara ity Soratra Masina ao amin’ny Filazantsara araka an’i Matio 7 : 5 ity : “Ry mpihatsaravelatsihy, esory aloha ny andry eo amin’ny masonao, ary amin’izay vao ho hitanao tsara ny hanesoranao ny sombin-kazo eo amin’ny mason’ny rahalahinao”.